PressReader - Ilanga: 2017-11-09 - IZANDLA ZIDLULA IKHANDA NGENKONDLO KAMNTWANA
IZANDLA ZIDLULA IKHANDA NGENKONDLO KAMNTWANA
Ilanga - 2017-11-09 - Imib -
MHLELI: Ngicela ungiphe isikhala ngisike elijikayo ephephandabeni lesizwe elihamba phambili. Ngifisa ukubonga kakhulu ngokuthi ILANGA liveze inkondlo yami ebhekiswe kuMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi mhla ziyisi-6 kuLwezi (November).
Mhleli, mina nazo zonke izakhamizi ezakhele umasipala onomlando omude KwaZulu, iZululand, sithi impela izandla zedlula ikhanda.
Ngaphambi kokuba ngiphethe, ngiyafisa Mhleli uma ucosha ithuba wena nezintatheli zakho, nike nisibuzele kwiziphathimandla zakumabonakude ukuthi osonkondlo nezinkondlo yini lena kazikho izinhlelo zikamabonankude eziqondene nezimbongi, uKhozi FM lona izimbongi luzipha isikhathi esincane emini.
Kangifuni nakuyiphatha eyalo msakazo lapho osonkondlo benikwa isikhathi ebusuku bonke abantu belele, lokho kungikhalisa ngoba kuneshaneli kamabonakude ekhokhelwayo ebengiyibuka, inohlelo olumnandi losomahlaya nosonkondlo. Siyacela baphiwe ithuba osonkondlo.
Mbali Mhlungu E-VRYHEID
esazidlela yona. Ngikusho lokho ngoba